९ जेष्ठ २०७९ सोमबार | 23rd May, 2022 Mon
29th September, 2021 Wed ०९:१०:४३ मा प्रकाशित
घनश्याम कमरेडले तीन बुँदे फरक प्रस्ताव राखेको सहि हो । उहाँले महाधिवेशनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ । यो कुनै अचम्मको कुरा हो र ? पार्टीमा फर्किएका १० जना साथीहरूको माग सम्बोधन गर्न हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।
अब एमालेभित्र कुनै विवाद छैन । पार्टीभित्र अझै मतभेद छ भन्नु १०० मा २०० प्रतिशत झुट कुरा हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । मिडियाका साथीहरूसँग मेरा केही जिज्ञासा छन् । हिजो हामीले केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर केन्द्रीय आयोजक कमिटी बनाएका थियौँ होइन ? त्यो आयोजक कमिटी फेरि भंग गरेर पुरानै केन्द्रीय कमिटी पुर्नस्थापित गरियो कि गरिएन ? यी निर्णय पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन र एकताबद्ध बनाउन अगाडि बढाइएको कदम होइन र ? पुराना सबै उपाध्यक्षलाई पुर्नस्थापित गरियो कि गरिएन ? त्यसपछि १० बुँदे सहमतिलाई स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरियो । बैठकले अनुमोदन मात्रै होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणासमेत गर्‍यो । घोषणा मात्र होइन कार्यान्वयनको सवालमा कहाँ-कहाँ बाधा-व्यबधान छ, त्यसलाई समाधान गरी कार्यान्वयन गर्न देशैभर ७ प्रदेशमा सहजकर्ताहरू खटिएका छन् । यसलाई थप प्रष्ट पारी कार्यान्वयनलाई मजबुद बनाउन सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भीम रावल नेतृत्वको कार्यदललाई विस्तार गरी समस्या समाधानको निचोड निकाल्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसै विषयमा अझ सहज बनाउन सोमबार राति अबेरसम्म गृहकार्य गरेका छौं । कतिपय मिडियाका साथीहरूले पार्टीभित्रका बहस र छलफललाई नेगेटिभ ढंगले प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छन् । त्यो दुःखको कुरा हो । मिडियाका साथीहरूले कतिसम्म गरे भने आइतबार केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्दा १० बुँदे कार्यान्वयन पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएन भन्ने आलोचना भयो । १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि भीम रावलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउँदासमेत प्रश्न उठाउनु पूर्वाग्रही बाहेक केही होइन ।
प्रदेश १ को १४ जिल्ला मध्ये १२ जिल्लामा वडा तहमै विवाद समाधान भइसकेको छ । बाँकी सुनसरी र ताप्लेजुङमा छलफल जारी छ । यो ढंगले काम भएको छ । तरपनि मिडियामा विवाद ज्युँकात्यूँ रहेको भन्दै समाचार प्रस्तुत हुन्छ । एक दुई ठाउँमा देखिएको विवादलाई सबैतिर विवाद छ भन्न त मिल्दैन नि ? तेस्रो पक्षलाई नेतृत्वले झुक्यायो । १० बुँदे कार्यान्वयन गरेन भन्ने जस्ता नेगेटिभ समाचार प्रस्ततु गर्न त भएन नि ।
जहाँसम्म तपाईँले राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठनात्मक संरचनाको विषयमा नेता घनश्यामको असहमति छ भन्ने कुरा उठाउनु भयो । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यो के अचम्म भयो र ? घनश्याम कमरेडले तीन बुँदे फरक प्रस्ताव राखेको सहि हो । उहाँले महाधिवेशनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ । यो कुनै अचम्मको कुरा हो र ? पार्टीमा फर्किएका १० जना साथीहरूको माग सम्बोधन गर्न हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।
उहाँहरूकै माग सम्बोधन गर्न सोमबार स्थायी कमिटी बैठक राखिएको होइन ? राति अबेरसम्म छलफल गरेका छौं । अब पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन । पार्टीको नीति र प्रकृयागतरुपमा अब छलफल अगाडि बढ्छ । भएका केहि समस्या समेत स्थायी कमिटी बैठकले टुंगोमा पुर्‍याउने आधार तय गरेको छ ।
(नेम्वाङ पूर्वसभामुख एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता हुन्)